နွေရာသီ - ဝီကီပီးဒီးယား
(နွေဥတု မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
နွေရာသီကာလ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ ကွင်းပြင်တစ်ခုအား တွေ့မြင်ရပုံ
သဲမုန်တိုင်း ၊ မီးမုန်တိုင်း ၊ မိုးတိမ်တိုက်
မိုးလေဝ၊ ရာသီဥတုလေ့လာခြင်းအတတ် ၊ ရာသီဥတု
နွေရာသီသည် သမပိုင်း ရာသီ လေးခုတွင် အပူဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်ပြီး နွေဦးကာလနှင့် ဆောင်းဦးကာလအကြားတွင် တည်ရှိသည်။ နွေ ယဉ်စွန်းချိန်တွင် နေ့များသည် နေ့တာရှည်လျားပြီး ညတာတို့ကာ နွေယဉ်စွန်းချိန်ပြီးသောအခါမှ နေ့၏ အချိန်အလျားသည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားသည်။ နွေနေ့ရက်များ၏ပထမဆုံးသော နေ့သည် ရာသီဥတု၊ ရိုးရာဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုများအရ ကွဲပြားကြသည်။ မြောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတွင် နွေရာသီဖြစ်ပေါ်နေချိန်၌ တောင်ကမ္ဘာခြမ်း၌ ဆောင်းရာသီ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
နွေရာသီဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပူနွေးသော ရာသီဥတုအခြေအနေရှိသည်။ အရှေ့အာရှဒေသတွင် မုတ်သုံလေကျရောက်သောကြောင့် မိုးရွာသွန်းသော ရာသီအခြေအနေ ရှိနေစဉ်တွင် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၌ ခြောက်သွေ့သော ရာသီအခြေအနေရှိနေသည်။ စွက်စိုသော ရာသီဥတုအခြေအနေသည် ဆာဗားနား ရာသီဥတုစနစ်အတွင်းတွင် ပါဝင်ပြီး သီးပင်စားပင်များ အဓိကပေါက်ရောက်ရာ ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ စွက်စိုသော ရာသီသည် မုန်သုန် ဟုခေါ်သည့် ရာသီလိုက်အချိန်မှန် ပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်နေသော လေများနှင့် ဆက်စပ်၍ နေလေသည်။ 
၁၉၉၂ ခု၊ ဩဂုတ်လ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဟာရီကိန်း လက်စတာ၏ ပုံ
မြောက်အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်ရာဒေသတွင် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းများကို ဇွန်လ ၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်အတွင်း တွေ့ရသည်။ စာရင်းဇယားများအရ အမြင့်ဆုံး အတ္တလန်တိတ် ဟာရီကိန်း ရာသီသည် ၁၀ ရက် စက်တင်ဘာလ ဖြစ်သည်။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့မြောက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင် မုန်တိုင်းများသည် အတ္တတိတ်သမုဒ္ဒရာ၌ ဖြစ်ပွားသော ကာလ၌တွင်ပင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ အနောက်မြောက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် အပူပိုင်း ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းများသည် တနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပေါ်နေလေ့ရှိပြီး ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လတွင် လျော့ပါးလေ့ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးကာလမှာ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းများသည် ဧပြီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအနေအထားရောက်လေရှိသောအချိန်မှာ မေလနှင့် နိုဝင်ဘာလတွင် ဖြစ်သည်။ တောင်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတွင် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ဧပြီလကုန်အထိဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားချိန်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှ မတ်လဆန်းထိဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများသည် နွေဦးမှသည် နွေရာသီတလျှောက်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် မိုးသီးများ၊ လေပြင်းများ၊ လေဆင်နှာမောင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး နေ့လယ်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များသည် များသောအားဖြင့် ရှည်လျားသော နေ့တာနှင့် ပူနွေးသော ရာသီဥတုကို ခံစားရစေခြင်းအကျိုးငှာ ကျောင်းများကို ပိတ်လေ့ရှိကြသည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် ဒီအချိန်၌ ကလေးများအတွက် ကျောင်းများပိတ်ကြသောအချိန်ဖြစ်သော်လည်း ပိတ်ရက်မှာ ကွဲပြားကြသေးသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျောင်းများသည် ဇွန်လအစောပိုင်းတွင် ပိတ်လေ့ရှိသော်လည်း ကောလိပ်များမှာမူ မေလအစောပိုင်းမှာသာ နားရက်စကြသည်။ သို့ပေမယ့်လည်း အချို့သောကျောင်းများတွင် မေလ၏ နောက်ဆုံးကြာသပတေးနေ့ (သို့) နောက်ဆုံးရှေ့ကြာသပတေးနေ့တွင်မှ ပိတ်ကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဧပြီလတွင် ကျောင်းများပိတ်ကြပြီး ဇွန်လနှောင်းပိုင်းနှင့် ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် ပြန်ဖွင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျောင်းပိတ်ရက် ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်း၊ မတ်လအစတွင် ပိတ်လေ့ရှိပြီး ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းဖွင့်ချိန် ပြန်ရောက်သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် ဝေလနိုင်ငံတို့တွင် ကျောင်းများသည် ဇူလိုင်လလည်လောက်တွင် ပိတ်ကြပြီး စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် ပြန်ဖွင့်ကြသည်။ စကော့တလန်နိုင်ငံတွင်တော့ နွေရာသီအားလပ်ရက်သည် ဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင်စပြီး ဩဂုတ်လလယ်မှ လကုန်ခါနီးလောက်တွင် ပြီးဆုံးသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၌ ဇွန်လနှောင်းပိုင်းတွင် နွေကျောင်းပိတ်ရက် စတင်ပြီး စက်တင်ဘာလအစောပိုင်း၌ ကုန်ဆုံးသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ဧပြီ၊ မေနှစ်လသည် နွေကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံတွင်တော့ ကျောင်းပိတ်ရက်သည် မေလအကုန်မှ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိဖြစ်သည်။ တောင်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်တော့ နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွင် အဓိကအားလပ်ရက်များဖြစ်သော ခရစ္စမတ်နေ့နှင့် နှစ်သစ်ကူးနေ့တို့ ပါဝင်သည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတို့တွင် နွေကျောင်းပိတ်ရက်သည် ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် စတင်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ အစောပိုင်းတွင် ပြီးဆုံးသည်။ ကင်မရွန်းနိုင်ငံနှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတို့တွင် ရှိသော ကျောင်းများ၏ နွေကျောင်းပိတ်ရက်သည် ဇူလိုင်လလယ်လောက်တွင် စပြီး စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးအပါတ် သို့ အောက်တိုဘာ ပထမပါတ်တွင် ကျောင်းများကို ပြန်ဖွင့်ကြသည်။
လူများသည် နွေရာသီကာလအတွင်း ပူနွေးသော အပူချိန်၏အကျိုးကို ခံစားရစေခြင်းအလို့ငှာ အပြင်၌တွင်သာ အချိန်ဖြုန်းကြသည်က များသည်။ နွေရာသီလများအတွင်း လှုပ်ရှားမှုများတွင် ကမ်းခြေများသို့ ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပျော်ပွဲစားသွားခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ အားကစားများအနေဖြင့် ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်း၊ အမေရိကန်စတိုင် ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ဘောလီဘော ကစားခြင်း၊ ဘေ့စ်ဘော၊ စကိတ်စီးခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဘော၊ ခရစ်ကတ်၊ တင်းနစ်၊ ဂေါ့ဖ်၊ ဝါးတားပိုလို ကဲ့သို့သော အားကစားနည်းများ ကစားကြသည်။ ၁၈၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ လေးနှစ်တစ်ကြိမ် နွေလများ၌ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော်ကိုလည်း ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆစ်ဒနီမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၀၀ နွေရာသီအိုလံပစ် အားကစားပွဲတော်ကိုတော့ ဩစတေးလျတွင် နွေဦးရာသီဖြစ်နေချိန်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
နွေရာသီကာလတွင် သာမန်အားဖြင့် တယ်လီဗစ်ရှင်းကြည့်ရှုမှု အနိမ့်ဆုံးအမှတ်တွင် ရှိခဲ့သည်။ တီဗွီအစီအစဉ် စီစဉ်သူများအနေဖြင့် ထိုအပြုအမှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် သူတို့၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားသော တီဗွီအစီအစဉ်များကို မေလအကုန်တွင် ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလတွင်မှ ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် ကလေးများအကြိုက် တီဗွီအစီအစဉ်များအနေဖြင့် ချွင်းခြက်အနေဖြင့် မပါဝင်ပေ။ ဒစ္စနေချန်နယ်ကဲ့သို့သော ကလေးများအတွက် ထုတ်လွင့်နေကြသော တီဗွီလိုင်းများတွင် ကလေးများအတွက် ပြုလုပ်ထားသော၊ ကလေးများအကြိုက် တီဗွီအစီအစဉ်များကို နွေလများတွင် ကလေးများကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် ထုတ်လွင့်ကြသည်။
နွေကာလ ကလေးများ စက်ဘီးစီးနေပုံ
နွေရာသီချိန်ခါ၌ Fig trees များ၌ အသီးများ ဝေဆာနေပုံ
နွေရာသီတွင် စပိန်နိုင်ငံ၌ အများဆုံးသောက်ကြသော တင်နို ဒီ ဗီရာနို(Tinto de verano)
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ Sesimbra ရှိ ကမ်းခြေတွင် ရေထဲသို့ ခုန်ဆင်းနေသော ကလေးများ
↑ Charles Darwin University (2009). Characteristics of tropical savannas. Charles Darwin University. Retrieved on 27 December 2008.
↑ Glossary of Meteorology (2009). Monsoon. American Meteorological Society. Retrieved on 16 January 2009.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Hurricane Research Division။ Frequently Asked Questions: When is hurricane season?။ National Oceanic and Atmospheric Administration။ 25 July 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ McAdie, Colin (10 May 2007)။ Tropical Cyclone Climatology။ National Hurricane Center။9June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tropical Cyclone Operational Plan for the Southeastern Indian Ocean and the South Pacific Oceans။ World Meteorological Organization (10 March 2009)။6May 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Filipino National
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နွေရာသီ&oldid=419626" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။